မြ၀တီ - (၃၁)ကြိမ်မြောက် သာသနာ့ဝန်ဆောင် သာမဏေကျော် စာတော်ပြန်ပွဲ ဖြေဆိုနေသည့် သံဃာတော်များ၊ ရှင်သာမဏေများနှင့် သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များအား တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ မိသားစုက နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်း
(၃၁)ကြိမ်မြောက် သာသနာ့ဝန်ဆောင် သာမဏေကျော် စာတော်ပြန်ပွဲ ဖြေဆိုနေသည့် သံဃာတော်များ၊ ရှင်သာမဏေများနှင့် သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များအား တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ မိသားစုက နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်း
Tuesday, 18 December 2018 21:46 font size decrease font size increase font size
သီလသုတ စွယ်စုံလှ၍ သာသနာ့ တန်ဆောင် အလင်းဆောင် နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ သာသနာ့ ၀န်ဆောင် အသင်းက ဦးစီး ကျင်းပသည့် (၃၁)ကြိမ်မြောက် သာသနာ့ ၀န်ဆောင် သာမဏေကျော် စာပြန်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်အထိ ရန်ကုန်မြို့၊ ရွှေတိဂုံ စေတီတော် အရှေ့ဖက်မုဒ်ရှိ တပ်မတော် ဓမ္မာရုံ၊ ရှင်သာမဏေ ဓမ္မာရုံ၊ မင်္ဂလာဗျူဟာ ဓမ္မာရုံ စာစစ်ဌာနများတွင် ကျင်းပလျက်ရှိရာ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ သံဃာတော်များ၊ သာမဏေ များနှင့် သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များအား ယနေ့တွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ မိသားစုက နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းသည်။
အဆိုပါ နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားသို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မျိုးဇော်သိန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သက်ပုံနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် သံဃာတော်များ၊ ရှင်သာမဏေများနှင့် သာသနာ့ နွယ်ဝင် သီလရှင်များ၏ ဖြေဆိုနေမှုများအား လိုက်လံကြည့်ရှု အားပေးကြသည်။ ယင်းနောက် ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ မဟာ ၀ိသုဒ္ဓါရုံ ကျောင်းတိုက်မှ တိုက်ကြပ် ဆရာတော် ဒွိပိဋကဓရပါဠိပါရဂူ ဘဒ္ဒန္တ၀ဇိရ ပါဏီ လင်္ကာရာဘိဝံသ အမှူးပြုသော သံဃာတော်များအား နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ် လှူဒါန်း ကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီး၊ မိသားစုဝင်များနှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများက စာဖြေ သံဃာတော်များနှင့် ရှင်သာမဏေများအား နေ့ဆွမ်းလောင်းလှူကြပြီး သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များအား နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းကြကာ သံဃာတော်များ၊ ရှင်သာမဏေများနှင့် သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များ နေ့ဆွမ်း ဘုန်းပေးနေမှုအား လိုက်လံ ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ စာပြန်ပွဲ၌ ပထမနေ့တွင် ၀ိနည်းပါဠိတော်၊ ဒုတိယနေ့တွင် အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်၊ တတိယနေ့တွင် ဓမ္မပဒပါဠိတော်နှင့် အဋ္ဌကထာတို့ကို ဖြေဆို ခဲ့ကြသည်။ ယင်းစာတော်ပြန်ပွဲ၌ ပထမအဆင့်တွင် ဖြေဆိုသူ ၁၃၇၃ ပါး၊ ဒုတိယ အဆင့်တွင် ဖြေဆိုသူ ၉၇၈ ပါး၊ တတိယ အဆင့်တွင် ဖြေဆိုသူ ၄၉၇ ပါး၊ စုစုပေါင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ သံဃာတော်၊ ရှင်သာမဏေနှင့် သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင် စုစုပေါင်း ၂၈၄၈ ပါး ၀င်ရောက်ဖြေဆိုကြပြီး ပထမအဆင့် ဖြေဆိုမည့် သံဃာတော်၊ ရှင်သာမဏေနှင့် သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များသည် နှုတ်ဖြေ စာမေးပွဲကို ပထမဆုံး ဖြေဆိုကြရပြီး နှုတ်ဖြေအောင်မြင်မှသာ ရေးဖြေစာမေးပွဲအား ဆက်လက် ဖြေဆိုကြရမည် ဖြစ်သည်။
စာတော်ပြန်ပွဲတွင် သံဃာတော်၊ ရှင်သာမဏေနှင့် သာသာနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်တို့သည် သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်အလိုက် ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ပထမအဆင့် ၀ိနည်းပါဠိတော်၊ ပထမအဆင့် အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်၊ ပထမအဆင့် ဓမ္မပဒ ပါဠိတော်၊ ဒုတိယအဆင့် ၀ိနည်းပါဠိတော်၊ ဒုတိယအဆင့် အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်၊ ဒုတိယအဆင့် ဓမ္မပဒပါဠိတော်၊ တတိယအဆင့် ၀ိနည်းပါဠိတော်၊ တတိယအဆင့် အင်္ဂုတ္ထိုရ်ပါဠိတော်၊ တတိယအဆင့် ဓမ္မပဒ ပါဠိတော်တို့ကို ဖြေဆိုကြ ရပြီး တတိယအဆင့်ကို အောင်မြင်မှသာ သာသနာ လင်္ကာရဘွဲ့ကို ဆက်ကပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဖြေဆိုခဲ့သည့် စာဖြေလွှာများကို မြန်မာတစ် နိုင်ငံလုံးရှိ စာသင်တိုက်များမှ စာချဆရာတော်များက အသေးစိတ် စစ်ဆေးပြီးမှသာ အောင် စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာပြီး သာမဏေကျော် စာမေးပွဲ ပထမအဆင့်နှင့် ဒုတိယအဆင့် စာမေးပွဲများကို အသက် ၂၀ အောက် သံဃာတော်နှင့် ရှင်သာမဏေ၊ သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များသာ ဖြေဆိုရပြီး တတိယအဆင့် စာမေးပွဲကို အသက် ၂၃ နှစ်အထိ ဖြေဆိုနိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
(၃၁)ကြိမ်မြောက် သာသနာ့ဝန်ဆောင် သာမဏေကျော် စာတော်ပြန်ပွဲတွင် အောင်မြင်ခဲ့ကြသည့် သံဃာတော်၊ ရှင်သာမဏေနှင့် သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်(ပြည်ထောင်စုနေ့) တွင် ရှင်သာမဏေ ဓမ္မာရုံ၌ ပထမအဆင့်နှင့် ဒုတိယ အဆင့်အောင်မြင်သည့် သံဃာတော်၊ သာမဏေနှင့် သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များကို စာအောင်ဆုနှင့် စာအောင် လက်မှတ်များကို ဆက်ကပ်မည်ဖြစ်ပြီး တတိယအဆင့် အောင်မြင် သည့် သံဃာတော်များ၊ ရှင်သာမဏေနှင့် သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များကို သာသနာ လင်္ကာရဘွဲ့ကို ဆက်ကပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သာမဏေကျော်စာပြန်ပွဲကို သီတင်းကျွတ် လကုန်ဆုံးသည်နှင့် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်ရှိ သာသနာရေး အသင်းများက မြို့နယ်များအလိုက် နှစ်စဉ် ကျင်းပလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Read 437 times Last modified on Tuesday, 18 December 2018 21:57
More in this category: « တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vikram Misri အား လက်ခံတွေ့ဆုံ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy အား လက်ခံတွေ့ဆုံ »